के ग्रान्ड ब्लू वर्थ हेर्दै हुनुहुन्छ? - पालना दृश्य
के ग्रान्ड ब्लू हेर्न लायक छ?
के यो लायक हेरिरहेको छ?
by Dima 29th नोभेम्बर 2020 12th जनवरी 2022
एक टिप्पणी छोड के ग्रान्ड ब्लू वर्थ हेर्दै छ?
अवलोकन - के ग्रान्ड ब्लू हेर्न लायक छ?
ग्रान्ड ब्लू एपिसोड १, सीजन १
के ग्रान्ड ब्लू वर्थ हेर्दै हुनुहुन्छ? ठिकै मैले २०१ Grand को प्रारम्भमा २०१ Grand को प्रारम्भमा, पहिलो पटक ग्रान्ड ब्लू हेरेको थिएँ। पहिलोमा मैले केहि विशेष कुराको आशा गरिरहेको थिएन, केवल तपाईको औसत एनिम श्रृंखला एक विशेष विषयको वरिपरि केन्द्रित। यस पटक यो डाइभि be हुन गयो, जसले सुरुमा मेरो चासो बढायो। मैले यस कारणले यसमा जाने निर्णय गरेको छु, मैले निर्णयमा पछुताउनु पर्दैन। चुटकुले मूर्ख अनुचित अनुहार चरित्रहरू सेट अप गर्न बाट पागल र हास्यास्पद योजनाहरूको लागि तिनीहरू आफैंमा खिच्दछन्, ग्रान्ड ब्लूसँग मेरो लागि सबै कुरा थियो र म प्रत्येक एपिसोडको पूर्ण आनन्द लिन्थें।
यदि तपाईंले पहिले नै ग्रान्ड ब्लू हेर्नुभएको छ र तपाईं सोच्दै हुनुहुन्छ कि यदि त्यहाँ एक सीजन २ छ भने तपाईं मौसम regarding को सम्बन्धमा हाम्रो लेख पढ्न सक्नुहुन्छ यहाँ। ग्रान्ड ब्लूले मेरो आँखा यो एनिमेटेड तरीकाको लागि होईन तर सबै कसरी सेट अप गरिएको हो भनेर हेर्यो, तर हामी पछि आउनेछौं। मँ सम्मिलित गर्न को लागी केहि सम्मिलित क्लिपहरु, मेरो पोइन्टहरु भर प्राप्त गर्न को लागी।
मुख्य कथा - के ग्रान्ड ब्लू हेर्न लायक छ?
[ग्रान्ड ब्लू एपिसोड १, सीजन १]
ग्रान्ड ब्लूको कथा डाइवि school स्कूलको वरिपरि घुम्छ जुन लोरी (हाम्रो मुख्य चरित्र) पहिलो भागमा भाग लिन्छ। लोरी पिकाबु डाइभि school स्कूलमा सामेल हुन्छ (मलाई किन यो कि भनेर भनेर किन थाहा छैन) र तुरुन्तै केही नयाँ साथीहरू बनाउँदछ। लोरी छँदा उसले केहि नयाँ वर्णहरू भेट्दछ जुन हामी पछि आउँनेछौं। लोरी पौडी गर्न सक्दैन र सागरको डर छ, त्यहाँ बाहिर जान र यसको आनन्द लिन उसले आफ्नो डरलाई पार गर्न र एक उत्कृष्ट गोताखोर बन्नको लागि कडा प्रयत्न गर्छ। यदि यो डाइभिंग स्कूलमा थियो यो भन्दा यो अधिक केही थिएन भने यो थोरै बोरिंग लाग्नेछ। जे होस्, पेकबु डाइभिंग स्कूल सबै यस्तो छैन जस्तो देखिन्छ। लोरीले यसलाई पहिलो एपिसोडमा फेला पार्छ र यो त्यहा हो जहाँ हामी मुख्य पात्रहरूसँग परिचित हुन्छौं।
मुख्य पात्रहरू - के ग्रान्ड ब्लू हेर्न लायक छ?
पहिले हामीसँग छ लोरी कितुहारा जापानको डाइभिंग स्कूलमा आउने निर्णय गर्ने विद्यार्थी हो। ऊ महिला, लि sex्ग र कामका बारे परम्परागत विचार राख्दछ, र रक्सीको आनन्द लिन्छ। मेरो विचारमा लोरी एकदम साधारण र तहको व्यक्ति जस्तो देखिन्छ, ऊ उसको अगाडि के चाहिन्छ, र राम्रो हृदय छ।
यद्यपि उसको बेवकूफता केहि चीज हो जुन सम्पूर्ण श्रृंखलामा जारी रहन्छ र यो लोरीको बारेमा परिभाषित विशेषता हो जुन धेरैलाई माया गर्छ। उनी डाइभिंगमा चासो राख्नेमा पहिलेको जस्तो देखिदैनन् र यो तबसम्म मात्र छ जब चिसाले उनलाई लाभ उठाउँदछ जुन उसले वास्तवमै महसुस गरी उसले आनन्द उठाउँदछ।
अर्को हो चिसा कोटेगावा जो जापानको लोरी जस्तो डाइभिंग स्कूलमा पनि जान्छ। पहिलो नजरमा चिसा एक शान्त / लजालु व्यक्ति देखिन्छ जसले सार्वजनिक रूपमा आफ्ना भावनाहरू व्यक्त गर्दैनन्। उनी प्रायः दगुर्छन् जब कुनै परिस्थितिमा अप्ठ्यारो वा अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ।
लोरी जस्तै उनी पनि रमाइलो चरित्र होन तर मेरो विचारमा यो कहिलेकाँही बोरि .्ग हुन सक्छ। तथापि यो प्रकट गरियो कि उनको मुख्य रुचि विपरीत लि or्ग वा अन्य केहीमा होइन तर केवल डाइभिंगमा हो, र यो देखाईन्छ कि उनी धेरै प्रतिबद्ध छन् र गोताखोरीमा समर्पित छिन्। उनी लोरीको लागि डाइभिंग गर्नप्रति आफ्नो प्रेम समेत व्यक्त गर्छिन्, र यिनै कारणले गर्दा उनी पानीको डरलाई जित्न सफल भए।
अन्तिम तर कम्तिमा होइन कौहेइ इम्मुहारा जो लोरीसँग साथी छ, यद्यपि उनीहरूसँग धेरै समय लाग्छ। एक कथन पीओवीको मामलामा, Kouhei लोरीलाई उसको धेरै पलायनमा मद्दत गर्दछ र कहिलेकाँही ती सुरू गर्ने व्यक्ति हुन्।
उहाँ पनि दुबै बीच एक पलटाव को रूप मा काम गर्दछ, र ती सबै जहिले पनि बहस, यद्यपि तिनीहरू एक अर्को समर्थन गर्न को लागी दुवै आफ्नो लक्ष्य अन्तमा काम गर्न। Kouhei एक धेरै रमाईलो र हास्यास्पद चरित्र हो, खास गरी जब उनी लोरीको साथ सम्मिलित हुन्छन्, र यसले ती दुईलाई एक हास्यपूर्ण जोडी बनाउँछ।
उप पात्रहरू - के ग्रान्ड ब्लू हेर्न लायक छ?
Azusa Hamaoka - ग्रान्ड निलो
ग्रान्ड ब्लूबाट सबै सान्दर्भिक उप-पात्रहरू
मलाई माथिका सबै पात्रहरू मन पराउँथे र ती सबै मलाई सम्झना हुन्थे। ती सबै अद्वितीय छन् र म तिनीहरूलाई मन नपर्ने एकल कारणको बारे सोच्न सक्दिन, तिनीहरू बोरिंग वा केही पनि छैनन्। तिनीहरू सबै आफ्नै तरिकाले धेरै हास्यास्पद छन् र मलाई लाग्छ कि उनीहरू राम्रा लेखिएका थिए। उदाहरण को लागी, हामी हेर्छौं कि Kouhei, सधैं परिस्थितिहरु को लागी तार्किक हुन को लागी प्रयास गर्दछ तर कहिलेकाहिँ उनी कहिले समाप्त हुन्छन् जसले तर्क शुरु गर्दछ। तपाईं यसको बारेमा रमाईलोको लागि ग्रान्ड ब्लूको कथा मनपर्दैन, यद्यपि म तपाईंलाई वाचा गर्न सक्छु कि, यसको हास्य मूल्य पर्याप्त छ।
कारण ग्रान्ड ब्लू हेर्न लायकको छ
मैले यो भन्दा पहिले यो भनेको थिएँ तर म पूरै ग्रान्ड ब्लूमा सबै पात्रहरू मन पराउँछु, यहाँसम्म कि टिन्करबेल टेनिस टोलीका कप्तान वा नोजिमा र याम्माटो जस्ता साना किराहरू पनि। प्रत्येक चरित्र यति अनौंठो र यादगार थियो, उनीहरूलाई चित्रण गरिएको तरीकामा मात्र होइन तर तिनीहरूलाई चित्रित र लेखिएको तरिकामा। प्रत्येक चरित्रको आ-आफ्नै समस्याहरू र व्यक्तिगत स्वभावहरू थिए जुन श्रृंखलाको माध्यमबाट अन्तिम केहि एपिसोड सम्म जारी रह्यो। यी पात्रहरूले म ग्रान निलो हेर्न मद्दत गर्दछ? प्रश्न र तिनीहरूले प्रत्येक चरित्रलाई एक अद्वितीय विशेषता दिए जुन उनीहरूले श्रृंखलामा विभिन्न तरिकाहरू मार्फत निर्यात गरे। लिनुहोस् कौहेइ इम्मुहारा उदाहरण को लागी, उहाँ लामो गोरा कपाल, एक नरम आवाज र निलो आँखा छ तर उनको बारेमा एक अर्को कुरा छ, उनी एनीमे "मॉस्टर जादू गर्ल लालाको" संग व्याकुल छ। यसले उसलाई अन्य केटीहरूमा रुचि राख्दैन किनकि उनीहरू “समान आयाममा पनि छैनन्।”
मैले ग्रान्ड ब्लूमा समान एनिमेसनहरू उनीहरूको एनिमेसनमा देखेका छन् तर केही पनि एनिमेसनको स्तर नजिक आउँदैन जुन ग्रान्ड ब्लूले काम गर्दछ। यो कुनै कल्पनिक वा विशेष बोलावटको केही हैन, तर यो मुख्य रूपमा प्रत्येक जोकले यसलाई सेटअप गर्ने तरिका र निम्नलिखित पंच लाइनमा निर्भर गर्दछ। यी पंचलाइन्स थपको साथ म ग्रान निलो हेर्न सक्छु? हामीले चरित्र अभिव्यक्ति हेर्न हामीले पाएका प्रत्येक भावनाहरू यी अत्यधिक अतिरंजित अनुहारहरू र आसनहरूमा चित्रित हुन्छ जुन श्रृंखला भर रहन्छ। म वास्तवमै निश्चित छैन कि यो उद्देश्य गरिएको हो वा होइन (राम्रोसँग यो केहि हदसम्म थियो) तर प्रत्येक मजाक तब मूर्ख पात्रहरूको साथ चरित्र द्वारा प्रबलित हुन्छ जसले प्रत्येक दृश्यलाई धेरै हास्यास्पद बनाउँदछ।
केहि सब भन्दा राम्रो आवाज अभिनय मैले सुनेको छु
ग्रान्ड ब्लू एक कारण हो जुन केहि एनिमेस कहिले पनि डब गर्नु हुँदैन, वास्तवमा, मलाई लाग्दैन कि यो शारीरिक रूपमा ग्रान्ड ब्लूको डब गर्न सम्भव छ, विशेष गरी लोरी र कोहेईको लागि होईन। यदि तपाईं मलाई सोध्दै हुनुहुन्छ भने मलाई लाग्छ कि आवाज अभिनेताहरू जसले लोरी र कोहिलाई गरे उनीहरूको कामको लागि एम्मी अवॉर्ड्स कमिंगको योग्य छ किनकि हरेक अन्तिम चीख, रोएको र हाँस्ने पूर्णतामा गरिएको थियो जस्तो देखिन्छ र यसले हरेक क्षणलाई यति रमाइलो बनायो। यो सबै को प्रश्न मा जोड्न को लागी म ग्रान्ड ब्लू हेर्नु पर्छ? र तपाईंले एपिसोड १ देख्ने बित्तिकै तपाईंलाई थाहा हुनेछ कि म के बारेमा कुरा गर्दैछु।
गतिविधिमा केन्द्रित भएको कारण म आफैंमा भाग लिन्थें, मैले ग्रान्ड ब्लूको कथा अत्यन्तै रमाईलो र आकर्षक पाएँ, गहिरो निलो समुन्द्रको अन्वेषण गर्ने सम्पूर्ण कथाको साथ धेरै पेचीलागी भयो। कथा एक्लो कथा वास्तवमै केहि विशेष छैन तर मलाई यो कम कुनै पनि मनपर्दैन। मलाई लाग्छ डाइभि aspect पक्ष बिना र केहि कम अनौंठो कथा (उदाहरणका लागि हाईस्कूल (विद्यार्थी परिषद)) ग्रान्ड ब्लू अझै पनि अत्यन्त हास्यास्पद र रमाइलो हुने थियो किनभने धेरै जसो हास्य उप-कथाहरूमा डाइभि withसँग केही पनि हुँदैन। । यदि तपाईंले ग्रान्ड ब्लूको क्लिपहरू हेर्नुभयो भने तपाईले मेरो मतलब के हुन जान्न सक्नुहुनेछ (ब्यूटी पेजन्ट सीन, परीक्षा दृश्य, टेनिस दृश्य आदि)। र यो अन्ततः मलाई प्रमाणित किन ग्रान्ड ब्लू यस्तो राम्रो हास्य छ, यो पनि राम्रो कथा आवश्यक छैन बिल्कुलै प्रफुल्लित हुन। यो सबैको प्रश्नमा म थप्छु म ग्रान्ड ब्लू हेर्छु?
शानदार सेट अप
केही मजाकहरु र पंच लाइनहरु को लागी अब बिघ्नकर्ताहरु को लागी म धेरै टाढा दिन चाहन्न तर यदि तपाइँ ब्यूटी पेजेंट दृश्य देख्नुभयो भने तपाइँले थाहा पाउनुहुनेछ कि म के गर्दैछु। (कृपया त्यो दृश्यलाई नहेर्नुहोस्, पहिले सम्पूर्ण श्रृंखला हेर्नुहोस अन्यथा यसले क्षति पुर्‍याउँछ।) त्यसोभए म ग्रान्ड ब्लू हेर्छु? म वास्तवमै त्यस्तो केहि आशा गरेको हुनुपर्दछ तर यो मलाई पायो! म अझै त्यो दृश्य फेरि देख्न सक्छु र अझै हाँस्दछु! जे भए पनि, प्रत्येक चोटि ग्रान्ड ब्लूमा मजाक स्थापित हुन्छ यो यस्तो यथार्थताको साथ गरिन्छ कि तपाईंलाई थाहा छ कहिले हाँस्न, केहि बेवकूफ हाँस्न ट्र्याकको आवश्यक पर्दैन।
अवास्तविक तर हास्यास्पद संवाद
ग्रान्ड ब्लूमा संवाद धेरै राम्रोसँग लेखिएको छ र क्षणहरू जुन अजीब मानिदैन पनि (मलाई लाग्छ) म आफैं हाँस्दै हाँस्छु। म निश्चित छु कि निर्माताहरूले कामका लागि उत्तम आवाज अभिनेताहरू पाए, विशेष गरी कोहेई र लोरीसँग उनीहरूको मुखबाट निस्केको हरेक शब्द यादगार छ।
धेरै जसो संवाद सहीसँग मिल्दोजुल्दो चरित्रसँग मिल्दछन् र म कुनै पनि समयमा सोच्न सक्दिन कि संवादले चरित्र के भन्न मिल्दैन, वा उनीहरूले के गरिरहेका थिए - यसको मतलब त्यहाँ त्यस्तो छैन।
मa्गा अलिक फरक हुन सक्छ, यद्यपि मलाई यो पढ्ने सुविधा छैन त्यसैले मलाई थाहा छैन। अव्यावसायिक तर हास्यास्पद कुराकानीले म ग्रान निलो हेर्छु भन्ने प्रश्नमा थप पार्छ।
कारण ग्रान्ड ब्लू हेर्न लायक छैन
सुस्त एनिमेसन शैली
यो कारण सोच्न धेरै गाह्रो छ कि गाण्ड निलो हेर्न लायक छैन तर शुरू गर्न को लागी म भन्न सक्छु एनिमेसन शैली एकदम सुस्त छ र निश्चित रूपमा केहि विशेष छैन। के यसले श्रृंखलालाई प्रभाव पार्दछ र के (श्रृंखला) यसले प्राप्त गर्न कोशिस गरिरहेको छ? कुनै तरिका छैन, म तपाईंलाई साँच्चिकै पनि यो भोलि निलो नहेर्नुको कारणको रूपमा सोच्न चाहन्न तर यो बढ्दो प्रश्नको उत्तरदाई मैले भव्य निलो अवलोकन गर्नु पर्छ? जुन तरिकाले चित्रण गरिएको हो त्यसले कथा वा चुटकुले कुनै प्रभाव पार्दैन, यो एनिमेटेड तरीका हो जसले यसलाई यति हास्यास्पद बनाउँदछ, आवाज अभिनय र सेट अपको साथ मिलाएर।
यो वास्तवमा तपाईको ग्रान्ड ब्लूको हिसाबले के कुरामा निर्भर गर्दछ किनकि यो सबैको लागि होईन। यसको मतलब मेरो यो हो कि कमेडी सबैका लागि उपयुक्त नहुन सक्छ। यौन सामग्री वास्तवमै कुनै समस्या होइन (यो यो हुनु आवश्यक छ कि होइन, केही दर्शकहरूले यसलाई मनपर्दैन) किनभने त्यहाँ त्यस्तो धेरै छैन। ग्रान्ड ब्लू एक खास प्रकारको कमेडीमा पर्दछ, यसले कम कम हास्यास्पद बनाउँदैन, किनभने हास्य हास्यपरक (अधिकतर) हो। कमेडी प्रकारले प्रश्नमा थप गर्न सक्छ म ग्रान्ड निलो हेर्न सक्छु?
निष्कर्ष - के ग्रान्ड ब्लू हेर्न लायक छ?
ग्रान्ड ब्लू रमाईलो एनिमेज हुनुपर्दछ जुन मैले देखेको छु, यदि तपाईंले यो हेरेको छैन र यसको बारेमा सोच्दै हुनुहुन्छ भने, म तपाईंलाई अत्यधिक सुझाव दिन्छु, जस्तो कि म निश्चित छु (यदि तपाईको एनिमे कमेडीमा छ वा सामान्य रूपमा कमेडीमा) तपाईले पछुताउनु पर्दैन पात्रहरू अनौंठो हास्यास्पद र अविस्मरणीय छन्, आवाज अभिनय उत्तम छ (र जब म सिद्ध भन्छु मेरो मतलब हो कि म अरू कुनै पनि मान्छेले दुई आवाज अभिनेताहरू भन्दा राम्रो आवाज गरिरहेको कल्पना गर्न सक्दिन) जुन Kouhei र लोरी खेलेको थियो), कुराकानी उत्कृष्ट छ र चुटकुले सेट अप र कार्यान्वयन तरिका आश्चर्यजनक र धेरै राम्रो गरीएको छ।
ग्रान्ड ब्लू season1 को लागी रेटिंग:
रेटिंग: out बाहिर।
यदि तपाईं अझै पनी निश्चित हुनुहुन्न कि वेदर हुनुहुन्छ वा तपाईं ग्रान्ड ब्लू हेर्न चाहानुहुन्छ यो भिडियो समाप्त नभएसम्म हेर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईंको के सोच्नुहोस् हेर्नुहोस्। आशा छ कि तपाईंले आफ्नो दिमाग बनाउनु भयोः
त्यसोभए म ग्रान्ड ब्लू हेर्छु? त्यहाँ ग्रान्ड ब्लू नहेर्नुमा धेरै कारण छैन, यदि तपाईंसँग समय छ र हाँसो गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने, म निश्चित रूपमा यसलाई विचार गर्नेछु। हामी आशा गर्दछौं कि यो ब्लग तपाईंलाई जस्तो जानकारी दिन यो प्रभावकारी भएको हुन्थ्यो, पढ्नको लागि धन्यबाद र दिन ठूलो छ।
टैग: animeep प्रकरण एनिमी एपिसोडहरू एनिमेसरीहरू grandbleuanimerview article grandblueanime grandblueanimeseries ग्रान्डब्लुआर्टिकल grandbluenaime grandblueonlinearticle grandblue समीक्षा ग्रान्डब्लुएनिमहेर्न लायक छ ग्रैंडब्लु हेर्न लायक छ समीक्षाग्यान्डब्ल्यू समीक्षाग्यान्डब्ल्यूएनिमे मैले ग्रान्डनीलो हेर्नुपर्छ मैले ग्रान्डनीलो हेर्नुपर्छ?
अघिल्लो प्रविष्टि आड़ू केटी - Funimations हिडन रत्न
अर्को प्रविष्टि Chisa Kotegawa - चरित्र प्रोफाइल